Iwu ejiji maka nwanyị
Ị bụ nwanyị azụmahịa nke na-aga nke ọma na-agbaso ejiji ma na-agba mbọ ka ọ mara mma ma dị mma? Mgbe ahụ ị na-achọ ka onye ọ bụla ghara ịmara na n'ụdị ejiji kwesịrị ekwesị, e nwere ọtụtụ iwu ụfọdụ, a na-akpọkwa ha koodu ejiji, nke nke a pụtara "koodu uwe."
Ụdị uwe ejiji nke nwanyị na-azụ ahịa abụghị uwe, n'ihi na a na-ahọrọ uwe dị iche iche n'otu n'otu dịka iwu ndị e guzobere na ụlọ ọrụ, ma ọtụtụ mgbe na-adabere na ọdịmma nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ndị ọrụ nke okike nwere ike ịbịaru uwe ndị na-abawanye uru n'ozi ha, mgbe ahụ, ndị inyom ndị na-azụ ahịa na ndị na-arụ ọrụ siri ike aghaghị ịkwado ụdị azụmahịa ahụ.
N'ụlọ ndị a ma ama, akwụkwọ uwe ejiji na-ekpebi na ị gaghị abịa ịrụ ọrụ n'otu uwe ahụ ugboro abụọ n'usoro. Ya mere, onye ọrụ ọ bụla ga-enwerịrị uwe ejiji ya ma ọ dịkarịa ala atọ atọ nke uwe ahụ, na-eme ka ibe ya dị ka agba na ụdị.
Ụdị uwe na-egosi ọnọdụ nke ụlọ ọrụ ahụ ma nọgide na-eme omenala ụlọ ọrụ, nakwa akụkụ nke ika ahụ. N'ebe ọdịda anyanwụ, nnukwu ụlọ ọrụ na-etinye iwu siri ike maka iwu uwe ejiji.
Ihe niile a machibidoro iwu gụnyere:
nyocha miri emi;
uwe e ji akwa ákwà;
n'elu na-emeghe afo;
obere akpa akwa;
Ọ bụ ezie na a na-achọta uwe ndị uwe ojii karịsịa na ụlọ akụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, mana o doro anya na ọtụtụ ndị ndú nke òtù ndị siri ike ga-agbaso ụkpụrụ iwu uwe. Taa, ụdị ịzụ ahịa na-aghọ ihe ejiji na ọbụna na-enye iwu na ọrụ nkwekọrịta.
A uwe na uwe na-adịghị na-agba gburugburu na nwere ogologo karịa n'elu ikpere bụ a na-emekarị uwe ejiji maka uwe ahịa ụmụ nwanyị. A ghaghị inwe ọtụtụ ihe ndị dị otú ahụ. A na-enyekwa ha ihe ndị na-emegharị ihe, na-akwado ndị jumpers na blouses. Ọbụna na okpomọkụ bụ ihe na-adịghị anakwere ọdịdị na ụlọ ọrụ na-enweghị tights.
A na-ahụkarị ụdị azụmahịa ahụ site na Monday ruo Thursday. Na Fraịdee na ihe dị iche iche ụlọ ọrụ, a na-ahapụ uwe na-ezighị ezi.
Ụdị ọrụ - nke a bụ ihe ndabere, anyị ga-enye ndị ọzọ ụdị nke ejiji ejiji:
Ụdị, Uwe zuru ezu - na-atụ aro ka ị na-eyi uwe agbụ.
Ọ bụ nke a na-ahụkarị, Ịṅụ sịga-ọ na-ekwu na uwe elekere mmanya n'ehihie dị mkpa, nakwa na uwe ndị mara mma nke mara mma bụ ndị na-achọsi ike.
Nkọwapụta bụ naanị uwe ahịa.
Ihe eji egwu egwu:
ohere iji uwe mwụda ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri zuru ezu ma ọ bụ ejiji ma ọ bụ ejiji, a pụkwara iji jeans;
Ị nwere ike ịgbanwe uwe nke a na-acha efere, jaket na jaket, dị ka ngwa, ị nwere ike itinye belt, site na ịchọ mma kwesịrị ekwesị na-abụghị ụbụrụ;
A ghaghị imechi akpụkpọ ụkwụ, tinye na sọks, tights ma ọ bụ sọks.
A na-atụ aro ego ndị ahịa, Country Club-Capri polo ma ọ bụ ogologo mkpụmkpụ ogologo, akwa ákwà dị mma.
Na uwe ejiji akwa nwanyi, agba di ezigbo mkpa. N'oge oyi, ọ dị mma iji ejiji na-acha anụnụ anụnụ, oliv na isi awọ, nchikota nke oji na ọcha dị mma iji oge eme ihe. Agba agba agba na agba chaa chaa mma maka oge okpomọkụ. N'ọzụ ahịa ndị inyom nke oge a ekwesịghị ijikọta karịa agba atọ.
Maka koodu akwa maka akpụkpọ ụkwụ, ọ kachasị mma iji kpochapụ ụkwụ, ikiri ụkwụ, mkpịsị ụkwụ na mkpịsị ụkwụ ga-emechi. A na-atụ aro agba, agba ntụ, aja aja na agba aja aja.
Ka anyị kwuo banyere uwe ejiji ejiji maka oge mgbụsị akwụkwọ nke afọ a
Ụdị uwe ejiji nke oge a na-anọchi anya uwe na ụdị dị iche iche, na ọnụ ọgụgụ kasị elu nke ewu ewu bụ ụdị nke ọkpụkpụ. Akara ndị a na-agụnye ịkpụ akwa akwa na uwe elu. Agba ụcha bụ nwa, acha anụnụ anụnụ na isi awọ.
Ndị na-ewu ewu na ọdịda a bụ uwe ndị agha. Ndị a bụ akara aka na eriri, eriri ubu, bọtịnụ ígwè na abụọ ahịrị. Ngwunye nke ihe ndị dị otú a bụ olive, nwa, khaki, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, agba aja aja.
Ahuma ahia atọ na-adabara n'omume ndị ikom ka dị mkpa, mana ejiji na-edu ndú na ụdị ịhụnanya nwanyị-nwanyị.
Anyị na-atụ anya na isiokwu anyị ga-enyere gị aka irube isi n'iwu niile nke uwe ejiji, mgbe ị na-anọgide na-eji ejiji na nke dị mma, yana izere ọnọdụ ihere ndị metụtara ịhọrọ uwe!
Ịzụta ihe ịga nke ọma!
Kedu esi achọta ọrụ na obere obodo?
Kedu ihe ma ọ bụrụ na enweghị ego?
Ihe ngosi - gini bu ya na olee otu o si di iche na nkwekọrịta?
Kedu otu esi enwe ihe ịga nke ọma na ndụ?
Njikọ mmadụ n'otu n'otu
Njikwa nke isi
Ahịa na-akpali iji dọta ndị ahịa
Kedu esi agba onye ọrụ?
Onodu aku na uba - onu ahia na onu ahia nke uba onu ahia
Ebube Jaketị - oge oyi-oyi 2015-2016
Na ihe na-eyi pink jeans?
Milkshake na ice cream na banana
Tilda Swinton agbanweela ka a nabata ya
Akụrụngwa maka ịkwụsị facade
Ọ na-eto eto na ọnwa asatọ
Ire na-afụ ụfụ
Ogige ọkụ ọkụ eletrik
Nkwekọrịta nke ụbụrụ
Karịa ịcha mmiri akụrụngwa?
Bọtịnụ ọla ntị
Uwe a na-ekpuchi ya
Ihe omuma di omimi na ihe omumu sayensi siri ike ikwenye
Kedu esi ehicha ákwà n'ime ụlọ?
Nnukwu National Park nke Yuskaran